Ini ndakafara kutambisa nguva yakawanda ndichingorova zvinozorodza pawebsite iyi inoshamisa - BGR - Tamban RELAY
Ini ndakafara kupambadza nguva yakawanda ndichingorova zororo pane ino inoshamisa webhusaiti - BGR
Mumwe murume nomurume kubva kuSingapore, vaneta pamwe nekwavo kwakavakirwa koronavirus mwedzi mishoma yapfuura, vakafunga kutanga kuvaka uye kuvhura webhusaiti inozadzisa wanderlust matiri tese sezvo vazhinji vedu tisingakwanise kufamba izvozvi.
Mhedzisiro yacho yaive "WindowSwap," saiti iyo inopa vashanyi nemavhidhiyo sniper mapepa ezvaunoona kana uchitarisa nepahwindo mumisha yevanhu kubva kutenderera nyika.
Kutumira kwacho kwasvika kwese kubva Giza kuenda kuBrooklyn, uye mapoinzi akawanda pakati.
Inenge mwedzi miviri yadarika, panguva yavanorondedzera seyakanyanya chikamu che kuitwa kuti vane coronavirus vasasangana nevamwe muSingapore, Sonali Ranjit naVaishnav Balasubramaniam vakatanga kutanga kusadzikama uye kunzwa "kushungurudzika" mukamuri yeimba yekurara.
Kupurudzira kuburikidza neye yavo Instagram kudya rimwe zuva, ivo vakatora tsamba kubva kushamwari inogara muBarcelona. Aive akagovana mufananidzo wemufananidzo kubva pawindo rake, akatarisa kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweSpain kwaanoti kumba. "Ndinoyeuka kuti aigunun'una nezvekuzvitutumadza - aivharika, zvakare - asi zvakatitaridzika," Ranjit akaudza BGR kuburikidza neemail. "Takanga tichiseka nezvekuda kwedu kuti dai tangoshandura nzvimbo naye ... patakauya nezano." Kana isu takatadza kuchinjanisa nzvimbo, pamwe tinogona kuchinjana kuwonekera kwemawindo. Uye kunyepedzera kuti takanga tiri kumwe kumwe kwechinguva. ”
Kunyepedzera kuva kune imwe nzvimbo kwechinguva kwechinangwa chaikurudziraWindowSwap,” a website these two creatives, along with freelance developer Maryam Touimi Benjelloun, decided to launch back in June. The idea is for people around the world to shoot 10-minute video clips from the perspective of looking through a window in their home or apartment, and to submit these to the couple’s site. So far, hundreds of people around the world have done so (all you have to do is email a horizontal, HD video that includes your window and frame to qunaliaa@gmail.com), and the results offer a welcome escape, however brief, from the feeling of being stuck at home, wherever you happen to be in the world.
Nzira yakanakisa yekunakidzwa saiti, mumaonero angu, iri pane hombe, inopararira mukombiyuta skrini. Uye ita chokwadi chekuti inzwi rako rakaburitswa. Sezvaunotenderera kuburikidza neakanakidzwa vhidhiyo snippets, iwe ungatombozviwana iwe uchinzwa zvishoma zvinoshamisa zororo. Unoona vanhu vakatakura zvikafu mumugwagwa. Motokari dzinopepereka na. Katsi yakagadzikwa parutivi rweTapurera mune kupisa kwezuva. "Saka izvi ndizvo zvakaita kugara muBritish Columbia, Canada," Ndinozviwana ndichiungana, ndakatarisa kunze kwe "Kaslow's Window" (ivo vese vakanyorwa zita reanotumira) panzvimbo yepazasi pegungwa rine miti nemakomo. kumativi ose. Uyu anobva Giza akanyanya kundiwisira kure:
Kwakagadzirwa mufananidzo: windows-s.com
Ndinobaya bhatani riri pazasi pechidzitiro kutenderera kune inotevera "hwindo," uye ndinokwaziswa ne "Taylor's Window," iyo inotarisana nemharadzano muBrooklyn. Unoona vanofamba nemabhasiketi, vanofamba netsoka, mota dzinofamba nemashopu, uye zvese zvinokatyamadza uye zvakanakawo panguva imwe chete, nekuti chinhu chimwe chete chausingawone, kutarisa nepawakatumirwa mawindo ekuona? Iko hakuna chiratidzo che coronavirus denda yakauraya vanhu vanopfuura mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kubvira pakupera kweChishanu, maererano Johns Hopkins University. Zvinongova zvinofinha zviratidzo zvehupenyu hwakajairika, chimwe chinhu chinogona kukunyengera, kana uchirega ichochi, mukubvisa kudzora kwako-kukoshwa kwemalairi kunyange kwenguva shoma yekuzviyeuchidza kuti hupenyu, zvirokwazvo, hunoenderera.
Vaviri ava vakandiudza kuti kubvira kuvhura "WindowSwap" saiti, vagamuchira zvinopfuura zviuru zvitatu zvekutumira. "Vanhu vanoita sekunge vanozvida nekuda kwezvikonzero zvakasiyana," akadaro Ranjit. "Zvinovashungurudza, kana kuvapa pfungwa (ye) yerunyararo kana inogutsa hunhu hwavo hwemukati. Vamwe vakataura kuti zvinobatsira nekusuwa kwavo. Vamwe vanoti (izvi) zvinobatsira kugadzira zvishoma kune avo akarambidzwa kufamba mafambiro.
"Tinofara kuti takabata vanhu vakawanda pasi rese."
Zvese zvandinoziva ndezvekuti - Adam, kubva kupi kana kupi kwauri muDerbyshire kuEast Midlands yeEngland (zvinoenderana neID ID yeiyo hwindo rekutarisa pamusoro), ndinovimba iwe kuti utiitira isu tese takasimba uye kurodha yakawanda yewindo rako maonero, nezvakawanda zveiyo bucolic Chirungu kumaruwa. Inotaridzika, kune ino yakagara kune yeAmerican, kufanana neparadhiso pasi pano.
Andy mutori wenhau muMemphis uyo anobatsirawo muzvitoro senge Fast Company neThe Guardian. Paanenge asiri kunyora nezve tekinoroji, anogona kuwanikwa achidzivirirwa pamusoro pezvaanotora zvekuunganidza vinyl, pamwe nekuyamwisa iye Whovianism uye kurumwa nemhando dzakasiyana dzeTV zvausingafarire.